Koa amin’izany aoka ho tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan’ny Rainareo Izay any an-danitra. Mat. 5:18
Rehefa manome ny Zanany ho an’izao tontoli izao Andriamanitra , dia nataony ho azo atao ho an’ny lehilahy sy ny vehivavy ny ho tanteraka amin’ny alalan’ny fampiasana ny fahafaha-manao tsirairain’ny maha-izy azy ireo ho voninahitr’Andriamanitra. Tao amin’i Kristy no nanomezany azy ireo ny haren’ny Fahasoavany, ary fahalalana ny sitrapony. Rehefa maniry ny hanafoana ny fiheveran-tanany izy ireo, ary mianatra ny handeha amin’ny fanetrentena , miankina amin’Andriamanitra mitady fitarihana, ny olona dia ho afaka hanatanteraka ny tarigetra ambony napetrak’Andriamanitra ho azy ireo.
Ny fahatanterahan’ny toetra dia mifototra amin’izay fiheverantsika an’i Kristy. Raha toa isika ka manana fiankinana mitohy amin’ny fahamendrehan’ny mpamonjintsika, ka mandeha eo amin’ny dian-tongony, dia ho tahaka Azy isika, madio sy tsy azo ahodina.
Ny Mpamonjintsika dia tsy mitaky zavatra tsy azo tanterahina avy amin’ny fanahy. Tsy manantena na inona na inona avy amin’ny mpianany Izy ka tsy maniry hanome azy ireo ny fahasoavana sy ny tanjaka hanatanterahana izany. Tsy ho niantso azy ireo ho amin’ny fahatanterahana Izy raha toa ka tsy manana eo ambany fahefany ny fahatanterahana tsirairain’ny fahasoavana mba hametrahana eo amin’ireo izay iriany hanankinana tombontsoa tena avo sy Masina.
Ny asantsika dia ny hikely aina mba hanatratra eo amin’ny faribolan’ny fahafaha-manaontsika ny fahatanterahana izay tratran’i Kristy teo amin’ny dingam-piainana tsirairay nolalovany teo amin’ny fiainany teto an-tany. Izy no ohatra ho antsika. Amin’ny zavatra rehetra dia tokony hikely aina fatratra isika mba hanome voninahitra an’Andriamanitra amin’ny toetra. Tokony hiankina-doha tanteraka amin’nyhery izay nampanantenainy fa homena antsika isika.
I Jesosy tsy naneho fahambonian-toetra, na nampihatra hery, izay tsy ho azon’ny olona amin’ny alalan’ny finoana ao Aminy. Ny maha olombelona tanteraka Azy ananana, raha toa izy ireo ka milefitra amin’Andriamanitra toy izay nataony.
Ny Mpamonjintsika dia mpamonjy ho an’ny fahatanterahan’ny olombelona rehetra. Tsy andriamanitry ny ampahany amin’ny voary fotsiny ihany Izy. Ny fahasoavan’i Kristy dia miasa ho amin’ny fifehezana ny lamban’ny olombelona izay manontolo. Nanao ny zavatra rehetra Izy.